अटेरी बनेपा ! – मिलिजुली खबर
अटेरी बनेपा !
in गृहपृष्ठ, जीवनशैली, फिचर, समाचार, समाज
बनेपाको चारदोबाटो क्षेत्रमा भदौ १ गतेदेखि ट्राफिक प्र हरीले नयाँ नियम लागू गरेको छ । नयाँ नियम लागू गर्नु अघि काभ्रेका ट्राफिक प्र हरी प्रमुख प्रमिला श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि, यातायात ब्यवसायी र सरोकारवाला पक्षसंग बृहत छलफल गर्नु भएको थियो ।
ट्राफिक प्र हरीले चारदोबाटोदेखि गोदामचोकसम्म पार्किङलाई ब्यवस्थित गराउन नयाँ नियम लागू गरेको हो । नयाँ नियम कार्यान्वयनका लागि प्रचार प्रसार पनि गरियो । तर नियम लागु भएको दिन ट्राफिक प्र हरीले थुप्रै सवारी साधनमा ह्विल लक गर्नु परेको थियो ।
मानौ यो त पहिलो दिन थियो । सबैले थाहा नपाउन सक्छन् । तर त्यसपछिका दिनहरूमा पनि अटेर गर्ने प्रवृत्ति निकै हाबी छ । ट्राफिक प्र हरीको आँखा छलेर पार्किङ गर्ने सवारी चालक र धनीको ब्यवहार कायमै छ ।
ट्राफिक प्र हरीले चारदोबाटोदेखि गोदामचोकसम्मको वारी १५ दिन र पारि १५ दिन पार्किङ गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाएको थियो । तर यो नियम पालना गर्ने भन्दा पनि उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढी छ । दिनहुँ जसो ट्राफिक प्र हरीले कुनै न कुनै सवारी साधन ह्विल लक गरिएको हुन्छ ।
नियम लागु भएको तीन साता बित्नै लाग्दा पनि ट्राफिक प्र हरी हातमा ह्विल लक लिएर बस्नु पर्ने अवस्था छ । ट्राफिक प्र हरीले चारदोबाटोमा पनौतीको गाडी रोक्ने र यात्रु चढाउने कार्यलाई बन्द गरेर भदौ १ देखि गाेदामचाेक स्थित सहकारी भवन अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो पनि ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
अब्यवस्थित पार्किङले बनेपा साँच्चै कुरूप बनिरहेको छ । तर त्यहाँका नगरबासी ब्यवस्थित पार्किङ आफुहरूबाटै सुरू गरौँ भन्ने पक्षमा देखिँदैन । सानो क्षेत्र र अत्याधिक मानिसको बसोबास बनेपाको मुख्य विषेशता हो ।
बनेपामा ब्यवस्थित पार्किङका लागि जनप्रतिनिधि आउनु भन्दापहिले कर्मचारी तहबाट पनि निर्णयहरू नभएका होइनन् । तर एक दुई हप्ता पालना गरेजस्तो गर्ने र फेरी पहिलेकै अवस्थामा अब्यवस्थित बन्ने बनेपाको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता हो । जसले गर्दा राजधानी पूर्वका जिल्लाहरुको प्रमुख ब्यापारीक केन्द्र बनेपा अस्तब्यस्त देखिन्छ ।
काभ्रेमा कांग्रेसको वडा अधिवेशन अनिश्चित, केन्द्रले निर्वाचन अधिकृत नै पठाएन
बनेपामा फोहोर फाले १५ हजार र पार्किङ गरे २५ हजार जरिवाना